China Class 1 iklasi 0 irabha izinto zeplastiki zokwambathisa abavelisi kunye nabathengisi | CESE2
Ukusebenza okungangenwa ngumlilo kwirabha enemibala yeplastiki B1 kunye neemveliso zeplastiki kuyazifezekisa ngokupheleleyo iimfuno zeklasi enokutshisa B1 nangaphezulu okuchazwe kwi-GB 8627 "Indlela yokuHlela ngokuDityaniswa kokuSebenza kwezixhobo zokwakha". Sebenzisa ifomula yokhuselo lokusingqongileyo eyahlukileyo, loo nto ikwimeko yokutsha, uxinzelelo lomsi lincinci, xa ukutsha kungazukuvelisa ingozi kumsi womntu.
Ukusebenza ngokukhuselekileyo komlilo
Itekhnoloji ye-foam encinci ye-nano, ukuqhuba okuphantsi kobushushu
Umbala werabha kunye nezinto zeplastikhi zokwambathisa zamkela ngokupheleleyo ubuchwephesha bokubiza i-nano micro technology, ukwenzela ukuba ukwenziwa kwangaphakathi kwesakhiwo sebhegi yomoya encinci; Ulwakhiwo lwangaphakathi oluvaliwe ngokupheleleyo, ukuze ukuqhuba kwe-thermal kusezantsi kwaye kuzinze, ukusetyenziswa kwexesha elide kwempembelelo yokugcina amandla kuyacaca.
Impilo yendalo esingqongileyo, umgangatho womoya ongcono ngaphakathi
Non-ityhefu, akukho ivumba, akukho ifayibha, akukho uthuli, akukho formaldehyde, cyanide kunye nezinye izinto eziyingozi, xi ephantsi volatilization organic, ukuqinisekisa umgangatho womoya ngaphakathi.
Imbonakalo yodidi oluphezulu, iyunifomu kwaye intle
Izinto zerabha kunye nezinto zokugquma zeplastiki zinemibala eyahlukeneyo, inkangeleko entle kwaye akukho mfuneko yokuhombisa. Ngapha koko, imibala eyahlukeneyo inokusetyenziselwa ukuqonda ulawulo lwembonakalo lweendawo ezahlukeneyo zenkqubo kunye nokuphucula iziphumo zeprojekthi.
Kulula kwaye kuyakhawuleza ukufaka
Izinto ezithambileyo, umbala owenziwe ngokwezifiso, ulwakhiwo olulula kunye nofakelo.
Flame retardant iklasi B1, umaleko edityanisiweyo non ezinokutsha iklasi A
0 ℃时I -0.032 W (mk)
40 ℃时I -0.035 W (mk)
Amandla einyembezi zamanzi
I-GB / T 10808
Ukunyanzeliswa kwenqanaba lokuncipha (inqanaba lokucinezelwa iipesenti ezingama-50, 72h)
Ukumelana nokuguga, i-150h
Imibimbi kancinane, akukho ukuqhekeka, akukho pinhole, akukho deformation
Uluhlu lobushushu olusebenzayo
Egqithileyo I-18W 40W 80W ikhuphe ukukhanya kwe-LED SMD kwigumbi elicocekileyo
Okulandelayo: 70W 100W 150W ombane omkhulu wokukhanya kweprojekthi ye-LED
Izinto zombala weRubber zokuvala izinto
Izinto zokuvala i-Thermal
abandayo liqengqiwe Ikhoyili intsimbi abandayo liqengqiwe nzima st nzima ...
>> Inkcazo yeCold Coil eqengqelekileyo yentsimbi (CRC) INKQUBO YOKUGQIBELA YOKUGQIBELA yentsimbi iveliswa kukucofa i-coil eshushu kunye nokuyiqengqa ngokufanayo kubushushu obabelweyo ukutyeba okucekeceke. Inobumbeko lobuso obugqwesileyo kunye neepropathi zoomatshini ezibalaseleyo zokusetyenziswa kwimveliso yezixhobo zeemoto kunye zombane. Ukucaciswa okusemgangathweni kweJIS G 3141: 2005 SPCCT-SD SPCD-SD, SPCE-SD, SPCF-SD, SPCG-SD ASTM A1008 CS TYPE A / B / C DS TYPE A / B, DDS EDDS EN ...
anti-ngomnwe GL galvalume intsimbi coil nophahla ...
I-55% ye-AL-ZN YOKUGQIBELA YENTSIMBI yesinyithi sisiseko sentsimbi esityikitywe macala omabini nge-aluminium-zinc alloy kunye nokwakheka kwengubo, i-aluminium engama-55%, i-43.4% ye-zinc kunye ne-1.6% yesilicon. Ukuxhathisa umhlwa ogqwesileyo kwe-Aluzinc sisiphumo seepropathi zezinto ezimbini zentsimbi: isithintelo sesithintelo se-aluminium ekhoyo kumphezulu wokwaleka kunye nokhuseleko lwe-zinc. Uluhlu Ubunzima 0.14 mm - 2.00 mm Ububanzi Range 600 mm - 1250 mm ...
Umbhobho we-PVC usetyenziswa ngokubanzi kulwakhiwo lwamashishini nolwaseburhulumenteni, kubandakanya umjelo wamanzi ngaphakathi nangaphandle, iprojekthi yombhobho welindle, inkqubo yokunkcenkceshela kwezolimo, umjelo wamachiza, ilindle, ikwalungele umbhobho wokungenisa umoya kunye nombhobho wokuhambisa amanzi, njl njl. ifaskoti) S-SDR igama elingaphandle ubukhulu (mm) ubukhulu bodonga (mm) uxinzelelo ngegama 0.63MPa S16 SDR33 63 2.0 75 2.3 90 2.8 S20 SDR41 110 2.7 125 3.1 140 3.5 160 ...
I-ANGLE STEEL inokudityaniswa ngeemfuno ezahlukeneyo zamacandelo oxinzelelo ngokwesakhiwo, inokusetyenziselwa unxibelelwano phakathi kwezinto. Isetyenziswa ngokubanzi kuluhlu lwezinto zokwakha kunye nezobunjineli, ezinje ngemiqadi, iibhlorho, iitawuli zokudlulisa, ukuphakamisa kunye nokuhambisa oomatshini, iinqanawa, izikhongozeli, iifanitshala zeshishini, iinqaba zokuphendula . Yorhwebo Punch ukusetyenziswa intsimbi engile ukwenza ugcino r ...
201 202 301 304 316 Hot asongwe Stainless Stainless ...
I-FLAT BAR yintsimbi enamacandelo omnqamlezo oxande uxande kunye nomphetho omncinci. Isenokuba yintsimbi egqityiweyo. Ikwanokusetyenziselwa ukwenza i-welding tube billet kunye nokupakisha iphepha elino-slab esibhityileyo, inokusetyenziselwa ukujija isinyithi, izixhobo kunye namacandelo oomatshini, kulwakhiwo olusetyenziselwa igumbi lenkunzi yegusha, ileli njl njl. Ukupakisha kwinyanda okanye ngokweemfuno zabathengi Ubunzima bempahla malunga neetoni ezi-2 ze-MOQ iitoni ezi-2 ngobukhulu beXesha ngalinye lokuHanjiswa kweentsuku ezili-15 ukuya kwezi-20 emva kokufunyanwa ...
engangenwa engangenwa thermal iglasi yokugquma w ...
Iglasi yentsimbi yeCentrifugal yinto eyenziwe ngeglasi etyhidiweyo eyenziwe yaza yafuthwa yaza yafafazwa ngentsimbi ye-thermosetting, yaze emva koko yanyangeka ngokufudumeleyo kunye nokulungiswa okunzulu, okunokwenziwa kuthotho lweemveliso ezinokusetyenziswa okuninzi, njengeglasi Umqhaphu. ibhodi, i-fiberglass duct, ibhodi yokulungisa umoya, ubushushu beglasi yeglasi, njl. >> Ukusebenza kweMveliso kunye nemigangatho: